आर्थिक सम्वृद्धि र स्थिर सरकारका लागि बामगठबन्धन नै चाहिन्छ : लामिछाने - लुम्बिनी समाचार
प्रकाशित मिती December 3, 2017 | Manorath Aryal
२०२७ साल असोज १० गते पाल्पा जिल्ला साविक सहलकोट गाविसमा पिता टेक बहादुर लामिछाने र माता सुमित्रा लामिछानेको कोखबाट जन्मिएका देविलाल लामिछाने एक निस्ठावान र प्रभावशाली नेताका रुपमा परिचित छन् । २०४३ साल देखी विद्यार्थी राजनीतिमा पाईला चालेका लामिछानेले २०४७ सालमा पार्टीको सदस्यता लिए । भने २०४८ सालमा गाउँ कमिटी सचिवको जिम्मेवारी पाए । २०५० सालमा इलाका कमिटी सचिव हुँदै पार्टीको पहिलो पिपुल्स भोलिनटिएरसको जिल्ला अध्यक्ष २०५४ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी पाए । भने लामिछानेले अहिले नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यको रुपा जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।जिल्लाको राजनीति सँग सँगै उनी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा पनि आबद्ध छन्, । सरल व्यक्तित्व,स्वच्छ छवि,कुरा भन्दा काम गर्ने उनको विशेषता हुन् । पार्टी भित्र उनलाई त्यागी र सन्त नेताको रुपमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिने गर्छ । पटक पटक विभिन्न पदका अवसरहरु आउँदा पनि अन्य अग्रज व्यक्तिहरुलाई स्थान दिनु पर्छ भनेर आफु संधै छाँया बनी पार्टीकाममा निरन्तर लागिरहे । विशेषत युवा पंक्तिको माझमा बढी लोकप्रिय नेता देवीलाल लामिछाने प्रदेशसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको रुपमा पाउँदा यस क्षेत्रका युवाहरु निकै उत्साहित पनि बनेका छन् । जनताको कामका लागि कहिल्यै पनि नाई नभन्ने,जहाँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जनताको सेवामा हाजिर हुने यि विविध गुणहरुले गर्दा उनलाई चुनाव जित्न सहज हुने अनुमान लामिछानेलाई राम्रो सँग नजिक बाट चिन्नेहरु बताउँछन् । विशेषत मगर समुदायको बाहुल्य रहेको यस क्षेत्रमा उनलाई समुदायले क्षेत्रको बलियो आशाको केन्द्रको रुपमा लिएको पाईन्छ । प्रस्तुत छ उनै देविलाल लामिछाने सँग गरिएको चार प्रश्न जस्ताको तस्तै ।
.चुनावी अभियान कस्तो चल्दैछ ?
चुनावी अभियान उत्साह जनक ढङगले अघि बढिरहेको छ । चुनावको मिती अन्तिम अन्तिम चरणमा आईसकेको हुनाले क्षेत्रका विभिन्न गाउँ,टोल,वडाहरुमा भेटघाट् अन्र्तक्रिया कार्यक्रम भैरहेको छ ।जनताको घर दैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छौँ । मतदाताहरु निकै उत्साहित हुनुन्छ,विशेषत यो क्षेत्र एमालेको पकड एरिया पनि हो । यसमा अझ अहिलेको बाम गठबन्धनले गर्दा थप आमा बुबा दिदी बहिनीहरुमा उत्साह थपिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा एकदमै राम्रो छ ।
.क्षेत्र नं १ को समग्र विकासको लागि तपाईसँग कस्तो योजना छ ?
हामीले समग्र क्षेत्र नं १ को विकासको योजनालाई पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरेका छौँ । र त्यही घोषणा पत्रको आधारमा अगाडी बढ्ने छौँ । रामपुर अरुणखोला सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने,केलादी सहलकोट झयालबास जोड्ने मोटरबाटो निर्माण,निस्दी खोलाका विभिन्न स्थानमा पक्की पुल निर्माण,ज्यामिरे हुँदै सर्दि जोड्ने मोटरबाटोको निर्माण,अरुणखोलामा पुल, व्यवसायिक कृषि,पशुपालन,झिरुबासको काउले डाँडालाई पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गरी आन्तरिक तथा वाहय पर्यटकमा बृद्धि गराई आर्थिक विकास गर्ने गुरुयोजना,कालीगण्डकीको पानी बाँकामलाङ भुताह डमरामा लगि सिंचाई गर्ने योजना, कालीगण्डकी करीडोरको विस्तार, युवा स्वरोजगार,विदेश पलायन रोक्ने विद्यार्थीहरुलाई सर्टिफिकेटको आधारमा शैक्षिक कर्जा,रामपुर नगरको व्यवस्थित सहरीकरण विशेषत हाम्रो क्षेत्र साँस्कृतिकरुपमा धनीभएको क्षेत्र भएको हुनाले साँस्कृतिक संरक्षण,सवद्र्धन जस्ता विभिनन योजनाहरु छन् । हामी योजना बनाएर जनतालाई आश्वासन दिने भन्दा काम गरेर देखाउन चाहान्छौँ । काम गर्दै जाँदा अन्य योजनाहरु पनि प्रथामिकतामा पर्न सक्छ ।जसरी होस यस क्षेत्रका जनताहरुलाई हामी सेवा सुविधा दिन चाहान्छौँ,हामी जनताकै सेवाका निम्ती जन्मिएका हौँ र त्यसमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ ।
.अहिलेको अवस्थामा बाम गठबन्धनको आवश्यकता किन ?
अहिलेको अबस्थामा बाम गठबन्धन मूलुकको आवश्यकता र हितको विषय हो । अहिले लोकतन्त्र खतराको स्थितिमा छ । नेपाली काँग्रेस पटक पटक सरकारमा हुँदा जन अपेक्षीत कार्य हुन सकेन त्यसो भएको हुनाले नेपाली जनता एकदमै निरासमा छन् । अब मूलुकलाई निकास दिन र जनताको निरासालाई तोड्न कम्युनिष्टहरु एक हुनु पर्छ,मुलुकमा स्थाई शान्ति र दिगो विकास हुनुपर्छ त्यसको निम्ती दुई ठुला कम्युनिष्ट घटकहरु मिलेर जानुपर्छ भन्ने विकल्प नभएको हिसाबले अहिलेको यो गठबन्धन भएको हो । मूलुकमा आर्थिक सम्बृद्धि ल्याउन, स्थिर सरकार बनाउन,देशलाई प्रगति र उन्नतीको पथमा अगाडी बढाउन नयाँ नेपाल बनाउन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न केबल यो बाम गठबन्धनले मात्रै सक्छ । त्यसकारण अहिले गठबन्धनको आवश्यकता भएको हो । यो गठबन्धनबाट जनताहरु निकै उत्साहित छन् भने काँग्रेसहरु निकै डराएका छन् । उनिहरुको सातो गएको छ । अब मूलुकलाई निकास दिने र जनताको भरोसा र आशाको केन्द्र यही बाम गठबन्धन हो ।
.देवीलाल लामिछानेलाई सूर्यमा नै मत किन दिने ?
यो देवीलाललाई मात्रै दिने मत हैन यहाँ मुलुकको सम्वृद्धी र विकास अनि देशको भविष्य पनि जोडीएको छ । नेकपा एमाले वा बाम गठबन्धनलाई विजय गराउनु भनेको देविलालले जित्नु हो । मूलत म समानुपातिक उम्मेदवार भएको हुनाले पार्टीले पाउने मत नै मैले पाउने हो । पार्टीले घोषणापत्रमा गरेका बाचा,र हामीले अहिले जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो । राजनीतिक हिसाबले भन्नु हुन्छ भने म २०४३ साल देखी अनवरतरुपमा विद्यार्थी राजनीतिमा यस क्षेत्रमा होमिएको मान्छे हुँ । मैले पार्टीमा गरेको योग्दान त्याग तपस्या र मैले यस क्षेत्रमा पु¥याएको योग्दानको मूल्याङकन यस क्षेत्रका जनताहरुले पक्कै पनि गर्नु भएको छ । मैले अघि यस क्षेत्रको विकासका लागि माथि बोलेका बाचाहरु पुरा गर्नका निम्ती र मूलुकमा स्थाई शान्ति ल्याई दिगोविकास आर्थिक सम्बृद्धि,संविधान कार्यान्वयन,जनतालाई शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगारी र सम्मुन्नतीको दिशामा अगाडी बढाउनका निम्ती सूर्यमा भोट हाल्न आग्रह गर्दछु । जनताहरुले स्थिर सरकार,२०५१ सालको मनमोहनको सरकार, केपी ओलीको सरकार फेरी देख्नलाई आतुर छन् । मुलुकलाई सम्वृद्धि तर्फ अगाडी बढाउन आवश्यक छ त्यो केबल अबको बामपन्थी सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।
(न्युज इ नेपाल डटकम का लागि कुशल अर्याल ले लिनुभएको अन्तरबार्ता )